News | car
News | Tag: car
यी हुन् महँगा कार चढ्ने नेपाली अभिनेत्रीहरु
कार बम विस्फोटनमा आठ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तान । प्रहरी कार्यालयलाई लक्षित गरी भएको आत्मघाती कार बम विस्फोटनमा परी अफगानिस्तानमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ ।
एजेन्सी । पेट्रोल र डिजेलको भाउ जसरी बढेको छ त्यसले सामान्य मानिसलाई कार किनेर एक सपना मात्रै हुन थालेको छ । यस्तोमा यदी तपाईले सस्तोमै अन्य कार हरु भन्दा जस्तै छिटो कुदाउन मिल्ने विद्युतिय कार लिन पाउनुभयो भने भन्दा राम्रो के होला र ?
एक पटक चार्ज गरेपछि ६०४ किलोमिटर गुड्ने आकर्षक विद्युतिय कार
एजेन्सी । यदी तपाईले सस्तोमै अन्य कारहरु भन्दा जस्तै छिटो कुदाउन मिल्ने विद्युतिय कार लिन पाउनुभयो भने त्यो भन्दा राम्रो के होला र ?
पर्वत । पञ्चासे केवलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडले प्रभावित क्षेत्रका किसान र मजदुरलाई रोजगारी र लगानीको समेत अवसर दिने भएको छ । पर्वत, कास्की तथा स्याङ्जाको सिमानामा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक एवं
कारको ठक्करले मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु
काठमाडौँ । मलेसियामा कारले ठक्कर दिदा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मलेसियाको पेनाङ राज्यस्थित कुलिममा कारले ठक्कर दिँदा बर्दियाका सुरेश केसीको मृत्यु भएको हो ।
बलिउडका यी कमेडियनहरु कति मुल्य कार चढ्छन्
बलिउडमा कमेडियनहरुको कमाइ राम्रो रहेको छ । उनीहरुको डिमाण्ड पनि उत्तिकै रहेको छ । फिल्म बाहेक विभिन्न सोबाट पनि उनीहरुले मनग्य कमाइ गर्ने गर्छन् । उनीहरुले प्रयोग गर्ने कारहरु पनि उत्तिकै लक्जरियस रहेका छन् ।
कस्ता कारका सौखिन छन् शाहरुख खान
बलिउडका किङ खानको जन्म सन् १९६५, नोभेम्बर २ मा भएको थियो । हंसराज कलेजबाट आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका शाहरुखलाई क्रिक्रेट खेल्न मनपर्छ । उनको मनपर्ने खाना तन्दुरी चिकन हो ।